Oli Lovia Oliva - Famolavolana
Lovia Oliva OLI, zavatra hita maso minimalist, dia noforonina nifototra tamin'ny asany, ny hevitra hanafina ny lavaka ateraky ny filana manokana. Nanaraka ny fandinihana ny toe-javatra isan-karazany, ny faharatsian'ny riaka sy ny fampivoarana ny hatsaran'ny oliva. Amin'ny maha-fonosana roa sosona, noforonina i Oli ka rehefa nanokatra izy io dia hanasongadina ny antony mahagaga. Ny endrika namorona dia nahazo aingam-panahy tamin'ny endrika oliva sy ny fahatsorana azy. Ny safidin'ny porselana dia misy ifandraisany amin'ny lanjan'ny fitaovana sy ny fampiasana azy.
Anaran'ny tetikasa : Oli, Anaran'ny mpamorona : Miguel Pinto Félix, Anaran'ny mpanjifa : MPFXDESIGN.
Lovia Oliva Miguel Pinto Félix Oli